Munaasabad loogu magac-daray Xus iyo Xusuus oo loo qabtay aqoon-yahan prof Cali Xasan Maxamed. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Munaasabad loogu magac-daray Xus iyo Xusuus oo loo qabtay aqoon-yahan prof Cali Xasan Maxamed.
Posted by: radio himilo April 12, 2017
Muqdisho – Waxaa munaasabad loogu magac-daray Xus iyo Xusuus oo lagu weyneynayay wax-qabadkii iyo sooyaalkii nololeed ee Prof Ali Xasan Maxamed – oo ay soo qaban-qaabisay Jaamacadda Muqdisho ayaa shalay lagu qabtay Hotelka Paradise ee magaalada Muqdisho.
Qeybaha kala duwan ee bahda wax-barashada, ururrada bulshada rayidka, mas’uuliyiin xilalka kala duwan kasoo qabtay dowladihii danbe, ardaydii uu wax soo baray iyo qaar badan oo kamid ah kuwii ay isla soo shaqeeyeen marxuumka ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda.
Dhamaan mas’uuliyiintii ka hadashay munaasabadda ayaa si isku mid ah uga hadlay waaya’aragnimada ay u lahaayeen nolosha prof Ali Xasan Maxamed.
Ugu horreynba, ustaad Mustafa Abdullahi Feyruus, Agaasimaha Machadka Cilmi-baarista Soomaaliya ee ISOS – oo hoos taga Jaamacadda Muqdisho oo marti-sharafta u guud marayay taariikhda ayaa aad uga hadlay waayihii nololeed ee prof. Cali Xasan Maxamed.
“Markii aan isla eegnay ereyga ugu mudan ee aan ku magacaabi karno howlkarnimada Prof, waxaan isla qaadnnay inaan ku tilmaanno – Waadigii Aqoonta iyo Barbaariyihii Bulshada,” ayuu yiri Feyruus.
Ehellada Prof Cali oo madasha lagu casuumay ayaa sidoo kale aad uga hadlay noloshiisa. Mid kamida ah ehellada marxuumka ayaa qiirooday mar uu ka sheekeynayay wixii uu ka ogaa!
“Runtii masii wado karo inaan hadlo, laakiin waxaa inaga baxay qof qaran oo danta bulshad si guud ugu heelanaa,” ayuu yiri isaga oo ilmada iska celinaya. “Markii uu guursanayay walaashay, aabahay AUN ayaa nagu yiri; Cali Xasan waa curadkayga ee ma ahan oo kaliya xididkiinna.”
Madaxda ugu sarreysa Jaamacadda Muqdisho oo ku sugnaa madasha ayaa sidoo kale ka sheekeeyey. Ibraahim Maxamed Mursal, Guddoomiyaha Jaamacadda Muqdisho oo ay muddaba soo wada joogeen meelo badan ayaa tilmaamay sifooyinkii uu ku yiqiin marxuumka.
“Wuxuu ahaa qof aqooneed,” ayuu yiri Ibraahim. “Haddii uu kugu arko buug gacantaada ku jira, wuxuu inta uusan ku salaamin oran jiray ii dhiib buugga aan anigu soo aqristee ugu horreyn. Mana aheyn shaqsi shaqada liida ama daahsada. Wuuna ka fogaa aragtiyada sirgaxan ee siyaasadda iyo maamulka la xiriira.”
Sidoo kale, Ibraahim ayaa xusay inay ku tala-jiraan adkeynta iyo dhameystirka dhaxalka ay ka tagaan dadka tiirarka u ah wax-barashada umadda oo ay ku jirto ururinta qoraallada iyo cilmi-baarista ay sameeyeen sida prof Cali iyo Kaastaro.
“Waxaan markii uu dhintayna qabriga iskugu sheegnay inaan dib u qorno qoraalladiisa iyo dhameystirka cilmi-baarisyadiisa,” ayuu yiri. “Waxaan sidoo kale xalay ka fikirayay sidii qeyb kamid ah kulliyadaha Jaamacadda loogu magacaabi lahaa. Waxaana aan si taas lamid ah ugu tala-jirnaa inaan dib u dhameystirno qoraalka prof Kaastaro kaas oo dhintay wax yar kahor markii uu soo diyaariyay marqaatiga Phd.”
Prof Cali Xasan wuxuu ku dhashay magaalada Ceeldheer sanadkii 1944kii. Wuxuu wax ku bartay dalalka Soomaaliya, Masar, Ruushka, Roomaaniya iyo Suudaan. Wuxuu haystay sideed shahaado heer jaamaceed iyo ka sarreeya; kuna kala qaatay muddadii u dhexaysay 1970-2002.
Wuxuu ku billaabay macallinnimo dugsiga sare sanadkii 1970kii, kadibna maamule dugsi sare Jowhar iyo Boorama iyo guddoomiye waxbarashada ee gobolka Mudug.
Kadib wuxuu u wareegay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna ka dhigayay Taariikhda iyo Culuumta Siyaasadda. Wuxuu soo noqday Hormuudka Kulliyadda Waxbarashada Lafoole 1983-85; iyo Hormuudka Kulliyadda Saxaafadda iyo Culuumta Siyaasadda (1988-1990).
Jaamacadda Muqdisho wuxuu ka dhigayay maadooyinka Daraasaadka Soomaalida iyo Daraasaadka Afrika. Wuxuu ahaa Guddoomiye-ku-xigeenka Akaadeemiyada ee Jaamacadda Muqdisho 1997 – 2016.
Wuxuuna Jaamacadda Muqdisho ka qaatay darajada Bare sare ama Professor sannadkii 2009.
Taas oo ugu danbeyn ka dhigtay in loo aqoonsado waadiga aqoonta iyo barbaariyaha bulshada.
Previous: Xaqiiqooyinka kulanka Atletico Madrid iyo Leicester City